I-China Mini Natural Gemstone 7 I-Chakra Crystal Money Tree kwi-Glass Wishing Bottles Ukuphilisa I-Chakra Wire Umthi Obhaliweyo woBomi oQhekeziweyo woMatshini weChip Stones kunye nabaxhasi | Jin Guan Yuan
Mini Gemstone 7 I-Chakra Crystal Tree yoMthi kwiGlasi yokuNqwenela iiBhotile Ukuphilisa I-Chakra Wire Ware Mthi Wobomi Uqhekekile Amatye eChip
[Ubungakanani bebhotile yeGlowstone]: Ukuphakama (malunga): 2,56 ", Ububanzi (malunga): 0.94", Ubunzima: 22g / ibhotile. Ubungakanani: 3pcs ikristali yomthi wobomi ojija ibhotile / iseti.
[I-Mini Tree Of Life Crystal Wishing Bottle]: Umthi weKristalu onqwenelekayo wenziwe ngesandla ngamatye e-tumbled chips kunye nomthi wobhedu oxhonywe emthini wobomi. Ifanelekile ukunqwenela, ukuphilisa, i-fengshui, ukuhonjiswa kwekhaya / iofisi / ubuchwephesha, ubugcisa, ukufundisisa, ukuqokelela ilitye, okanye uyixhome kwingxowa yakho ye-Luck entle kunye nePower Powers.
[Ukuphilisa i-Crystal] Ilitye ngalinye lokuphilisa ngokomoya linombala othile kunye ne-psychic vibration, likhupha amandla afanelekileyo okucoca kunye nokucoca i-aura yakho. Sebenzisa ukuphinda usebenzise i-reiki, ukuphilisa, ukucamngca, ukulinganisa i-chakra, ibhrashi yekristale, okanye isiko Ingasetyenziswa ngokudibeneyo ne-chakra yekristale wand.
[Inketho yesipho esifanelekileyo]: Iibhotile ezinqwenelekayo ziza nebhokisi yesipho, zilungele ukwenza isipho esihle sokuqokelela amatye, umenzi wamatye / umqokeleli, ishishini, ukuphakamisa amatye, umthendeleko, umhlobiso, usuku lokuzalwa, isipho sokuphumelela kunye nokunye!
[Nceda uqaphele] Ngenxa yobume belitye eliqaqambileyo, i-caving ingahluka kancinci ngokobukhulu, umbala kunye nesimo. Ukuba nawuphi na umbuzo, nceda ukhululeke ukunxibelelana nathi, siya kuzama konke okusemandleni ethu ukukusebenzela.
1. Ingasetyenziselwa njengokunqwenela iibhotile kwaye ifanelekile ekuhonjisweni kwekhaya / eofisini / edesikeni, umsebenzi wobugcisa.
2. Unokuyibopha kwisikhwama okanye kwisikhuselo sebhanti entloko.
3. Beka kwikona yedesika yakho, isherifu naphi na apho ufuna khona.
4. Inketho efanelekileyo yesipho, isipho esifanelekileyo kubahlobo abalungileyo, umqokeleli wamatye, umthandi, isipho sokuphumelela, isipho sendlu, umhlobiso wekristalu njl.
5. Igqibelele ngomnqweno, ukuphilisa, ukwenza ubucwebe, ifengshui, ukufundisisa, ukubonisa, ukuqokelela ilitye lokuzalwa kunye ne-more!
Edlulileyo: Ikhaya iGrips ephezulu yeGlasi ityuwa okanye i-Pepper Grass, Ibhotile yeXabiso lomzimba weGlasi
I-Bayonet cork control ibhotile yedayimitha engu-20mm ...
Iglasi yezipho zeglasi, Ibhotile ye-cosmetic, Iglasi yeBhotile yeZithambiso, Iiglasi zeCosmetic zeGlasi kwiibhotile zeoyile, Iglasi yeJar Cosmetic, Iseti yeBhotile yeZithambiso,